Ongororo Yakaitwa neHofisi yaAmai Chiri Inoti Makanzuru Ari Kutadza Kuita Mabasa Awo neMazvo
Chikumi 22, 2021
Harare City Council workers disinfect a bus terminal, in Harare, Zimbabwe, April, 1, 2020.
Mukuru wehofisi yaComptroller and Auditor- General, Amai Mildred Chiri, vanoti makanzuru emaguta nemadhorobha akawanda munyika haasi kuita basa nemazvo akaita sekutakura marara nekuwanisa vanhu mvura yakachena.
Gwaro rakaburitswa nehofisi iyi rinoratidza kuti makunzuru akawanda munyika ari kuita basa asingatevedze mitemo inobata mashandiro emakanzuru aya.
Gwaro iri rinoitwo pamusoro pekusatevedza mitemo, makanzuru aya ari kutadza kuita basa nemazvo.
GWaro iri rinoti kanzuru yeChitungwiza iri kungopa vanhu nzvimbo dzekuvakira dzimba nemabhizimisi pasina mvura, migwagwa nezvimwe zvinodiwa kuvepo nzvimbo isati yavakwa.
Kanzuru yeMasvingo inonzi inogaya 30 megalitres dzemvura pazuva asi guta iri richida 48 mega litres pazuva.
Kanzuru yeMutare inonzi haiendesi kubhanga mari yese yainowana uye kuGweru makanzura anonzi haasati abhadhara masitendi aakapihwa nemutengo uri pasi pasi kunyange hazvo aisungirwa kunge akabhadhara masitendi aya.
Zvimwewo zvakawonekwa inyaya yekuti midziyo inenge yatengwa nemakunzuru inotora gore kana kudarika isati yaendeswa kumakanzuru aya.
Sachigaro weUrban Councils Association of Zimbabwe, zvakarre vari meya veGweru, VaJosiah Makombe, vaudza Studio 7 kuti vanobvumirana nemaonero aAuditor-General, asi vakati zvimwe zvacho zvakatogadziriswa.
Asi VaMakombe vati nyaya yekupa vanhu mvura yakakwana nekutakura marara inonetsa kugadzirisa nekuti havasi kuwana rutsigro rwakakwana kubva kuhurumende.
Vati mafuta emotokari dzekutakura marara anotengeswa nemari yekunze asi ivo vachibhadharisa mitero nemari yemunyika.
Vatiwo kunyange hazvo vakapihwa mvumo yekuti vagari vanoda vabhadhare mitero nemari yekunze, hakuna vari kuita izvi nekuti simba remari yekunze rakadzikira mumabhanga kana zvichienzaniswa nepamukoto.
Vati nekuda kwaizvo vanhu vanochinja mari yavo pamukoto vobhadhara mitero kumakunzuru nemari yema RTGS.
Vanoona nezvekufambiswa kwebasa musangano rinomirira vagari vemuMasvingo, Amai Rumbidzao Mugurupira, vaudza Studio 7 kuti gwaro raAG raburitsa pachena zvavanogaro taura kuti hapana chinobatika chiri kuitwa nekanzuru yavo kuratidza kuti vari kubhadhara mitero.
Sachigrao veHarare Metropolitan Residents Forum, VaMarvelous Khumalo, vatiwo hurumende inofanira kuvandudza bumbiro remitemo yenyika kuitira kuti makanzuru akwanise kushanda akasanunguka.
Vati pari zvino pane kupindira kunoitwa nehurumencde uko kunokanganisa makunzuru aya.
Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo gurukota rezvematunhu, VaJuly Moyo, vange vasiri kudaira nhare mbozha yavo.
Vachitaura mushure mekutambira mabhajeti emakanzuru aya gore rino vasina kuaderedza, VaMoyo vakati vainge vaita izvi nekuti vaida kuti makanzuru aya awane mari yekuti akwanise kuita mabasa akaita sekuwanisa vanhu mvura yakachena nekutakura marara nguva dzose.
VaMoyo vakatiwo vanotarisira kuti makanzuru achashandisa mari dzekuvandudzwa kwematunhu kana kuti Devolution kusimudzira magariro evanhu.
Asi VaMakombe vati makanzuru akatomirira mari idzi nemaziso matsvuku kubva kuhurumende, sezvo asati apihwa mari idzi.